Umtsalane wakudala obuntofontofo bendlela yokuphila yanamhlanje - I-Airbnb
Umtsalane wakudala obuntofontofo bendlela yokuphila yanamhlanje
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguZeeshan
Indlu ihlala ibulawa iintsholongwane ngenxa yeCorona kwaye icocwa yonke imihla ngeDettol.
Ndinegumbi elinye elifakwe ngokupheleleyo kunye nendawo yokuhlala enazo zonke izinto zangoku entliziyweni ye-DHA, eLahore. Kumgama oziimitha ezingama-500 ukusuka kwindawo yoRhwebo yaseY Block oko kukuthi i-5 mins uhambe kuzo zonke iindawo zokutyela ezinkulu, indawo yokuThengisa, izibhedlele, kunye neevenkile ezinkulu. Udederhu lweevenkile, iSpa kunye neKlabhu nazo zikwindawo ekufutshane. Le ndlu nayo inethala leencwadi. Indawo yam ilungele izibini, ukhenketho lwenkcubeko, abafundi kunye nabahambi beshishini.
Igumbi lokulala eli-1 (labucala) kunye nekhitshi, indawo yokuhlala ekhululekile kunye negumbi lokuzoba (ekwabelwana ngalo). Igumbi elinye lokulala libucala kwaye ikhitshi kunye nendawo yokuhlala yabelwa umnini okanye ezinye iindwendwe. Ukufikelela lula kwisikhululo seenqwelomoya. Ikumgama oziimitha ezingama-500 ukusuka kwindawo yeevenkile ezinkulu kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka kudederhu lweevenkile ezinkulu. Ineendawo zokutyela ezilungileyo edolophini kumgama wokuhamba. Kukho ipaki entle kufutshane. Kubafundi, ndinethala leencwadi elincinane kunye nengqokelela enkulu yezakudala, kubathandi bomboniso bhanyabhanya kukho uthotho lwemiboniso bhanyabhanya kunye namaxesha onyaka!Eyona ndawo ingcono yendlu yindawo ekuyo, imi kumgama ohambahambayo ukusuka kwindawo yorhwebo yaseLahore, DHA Y. kwimarike block.
4.93 · Izimvo eziyi-155
Indawo efanelekileyo kakhulu kwaye ikufutshane kuzo zonke iindawo zokutyela ezinkulu, indawo yokuThengisa, izibhedlele, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, iiSpa kunye neeklabhu. Imizuzu eyi-10 uqhuba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Imizuzu emi-2 uqhuba umgama wendlela yeLahore (iRing Road) eyipaseji yomqondiso yasimahla ehamba yonke indlela ukuya kwinqaba yakudala yaseLahore kunye neendawo zembali kwaye kwelinye icala, ukuya ngaseMotorway. I-DHA inokhuseleko lwayo kwaye igadiwe imini nobusuku ngabasebenzi bokhuseleko. Indlu ngokwayo ibekwe kanye ecaleni kweOfisi yoKhuseleko eyenza ikhuseleke kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Zeeshan
Uncedo lweyure ezingama-24 luya kufumaneka ekhaya.